Ihe ndị pụrụ iche ma ọ bụ mpaghara ntinye chọrọ nhazi pụrụ iche.
Mgbanwe a na-eji n'oge usoro ịme ihe na-abụkarị ihe na-akpata mmebi na ọkụ na-arụ ọrụ. Ihe mgbagwoju anya nwere ike ibute mmebi nke akụrụngwa akụrụngwa. Ọzọkwa, n'ihi ikuku oxygen dị na ikuku ikuku nke ihe na-arụ ọrụ na-eme.
Enwere ike izere nsogbu ndị a mgbe ị na-atụgharị n'okpuru gas ma ọ bụ agụụ. Usoro gas nke inert nwere ike jikọta ya na kpo oku na-ekpo ọkụ n'ihi na enweghị ọkụ na-emeghe n'oge brazing ntinye n'okpuru gas na-echekwa ma ọnọdụ metụtara ọ flowụ canụ nwere ike ịchịkwa nke ọma.
Categories Technologies Tags ịgba egwu, nnukwu ihe na-eme ka gas na-arụ ọrụ, itinye bra inert gas inert, ihe na-eme ka ikuku oku na-eme ihe, itinye ọkụ n'ime ọkụ gas, itinye agbaze n'ime gas na-agbaze, ntinye ihe ikuku ntinye, gas inert, inert gas na-agba ume, inert gas brazing usoro, inert gas na-ekpo ọkụ, ihe na-ekpo ọkụ ikuku gas, inert gas ihe na-ekpo ọkụ, inert gas na-ere Mail igodo